Ingcinezelo alahlwayo nokubandakanywa Bag
Ingcinezelo esebenza nokubandakanywa Bag
Blood alahlwayo Pressure cuff
Blood esebenza Pressure cuff
Pump Manual sawa
Blood Pressure Iqhubu
isiciko sombhobho omkhulu
Lokulinganisa kunye kagesi
Enema Iqhubu / efakwa ngesirinji
Ear Wax HTTPComment Tool
Sawa Pipe Plug / sawa Pipe isivalo
Albert Group yinkampani globalizational izibonelelo eJamani, eUnited States, China kunye Poland. iqela Global injineli kuqinisekisa indlela ekhawulezayo nomgangatho ophezulu yeeprojekthi ezintsha kunye nesisombululo abathengi. lemveliso Global eqinisekisa unikezelo fast nezisebenzayo nkonzo.
Thina processing eyomeleleyo ebanzi kakhulu ukudibana kunye nomgangatho ophezulu kwiimarike.
focus group Albert kwi ixabiso umthengi. Yonke le minyaka, siye ezintsha iimveliso ezizodwa kunye nezisombululo kubathengi bethu. Jikelele ukuba siqonde imfuno yakho yokwenene.
Cofa apha ukuba ufuna ukwazi okungakumbi Custom Solutions.